डा. सुरजकुमार गुप्ताको सल्लाह : सिओपिडी रोगबाट कसरी जोगिने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ डा. सुरजकुमार गुप्ताको सल्लाह : सिओपिडी रोगबाट कसरी जोगिने ?
डा. सुरजकुमार गुप्ताको सल्लाह : सिओपिडी रोगबाट कसरी जोगिने ?
डा. सुरजकुमार गुप्ता दम तथा छाती रोग विशेषज्ञ नर्भिक अस्पताल, थापाथली बुधबार, २०७६ मंसीर ४ गते, १०:४१ मा प्रकाशित
सिओपिडी (COPD ) अर्थात् क्रोनिक अब्सट्रक्टीभ पल्मोनरी डिजिजले फोक्सोमा, श्वासप्रश्वासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । यो रोग लागिसकेपछि मानिसहरुमा श्वासप्रश्वासमा समस्या आउँछ । यसले क्रमसः बिरामीको फोक्सो बिग्रार्दै लैजान्छ । नेपालमा सिओपिडी हुनुमा धुँवा वायु प्रदुषण, धुम्रपान र वंशाणुगत गुणहरुले प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा प्राय दाउरामा खाना पकाउने हुनाले पनि सिओपिडीको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । बिरामीले धुलो धुँवासँग लामो समयमा बस्नाले फोक्सोका नलीहरु साँघुरिने हुन्छन् । सिओपिडीलाई पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । यसका लागि मानिसहरुले वायु प्रदुषणबाट बच्नुपर्छ र धुम्रपानलाई त्याग्नु पर्दछ ।
सिओपिडीमा मुख्यतयाः मानिसमा स्वाँ—स्वाँ हुने खकार निस्कने र खोकी लाग्ने हुन्छ । सिओपिडीले बिरामीलाई निकै दुःख दिएको अवस्थामा औषधि दिने र खोपहरु लागाउनु् पर्दछ । धेरै नै गाह्रो भएको अवस्थामा अस्पतालमा नै भर्ना भएर उपचार गर्न आवश्यक हुन्छ ।
छिटो छिटो श्वास फेर्न, कसरत गरेको बेलामा अलि बढी हुने
खोकी र खकारसँगै आउने र सजिलोसँग निको नहुने
छातीमा संक्रमण हुने
लगातार घाटीमा खसखस हुने
हरेक राती खकार निस्कने
लगातार रुघाखोकी अन्य श्वास सम्बन्धि समस्या हुने
कमजोर महसुस हुने
श्वास फेर्दा छातीबाट घ्वार—घ्वार आवाज आउने
सुरु—सुरुमा यस्ता लक्षण हप्ता वा अझै लामो अन्तरालमा एक पटक हुने गर्छ ।
रोग जटिल हुँदैं गएको खण्डमा दिनहुँजस्तो समस्या आइपर्छ ।
घ्वार—घ्वारजस्तै खोकी र श्वास फेर्दा सुसेल्न खोजेजस्तो आवाज आउन सक्छ ।
सुख्खा खोकीको समस्या दिउँसोमा भन्दा विहान र साँझ बितेपछि बढ्दा देखिन्छ । कसैकसैलाई भने दमको समस्या नभै खोकी मात्र लाग्ने हुन्छ ।
दम एलर्जीको कारणबाट सिर्जित रोग भएका कारण बिरामीलाई रुघा लागिरहने, शरीर चिलाउने र हाँच्छ्यु आइरहने पनि हुन सक्छ ।
छाती कस्सिएजस्तो वा केही कुराले थिचिराखेजस्तो हुने
लामो श्वास तान्न वा श्वास फाल्न खोज्दा बढी गाह्रो हुने ।
अधिकांश बिरामीमा चुरोट सेवनबाट यो रोग लाग्दछ ।
घरमा दाउँराबाट उत्पन्न हुने धुँवा र वायु प्रदुषणबाट यो रोग लाग्छ ।
अत्याधिक चुरोट सेवन गर्नाले र चुरोट सेवन गर्नेको नजिक बसेमा
धुलो र रसायनिक धुलोमा काम गरेमा
इन्धनको धुँवाबाट नजिक बसेमा
सिओपिडीबाट कसरी बच्ने
वायु प्रदुषणबाट बच्ने
कार्यस्थलमा भएका रसायनिक टाढा रहने
स्वस्थ जीवन शैली उपनाउने
धुम्रपान नगर्न र टाढा रहने
सिओपिडीको उपचार पद्धती
सिओपिडीको अवस्था पूर्ण रुपमा उपचार छैन तर यसलाई रोकथाम गर्ने र लक्षणलाई रोकथाम गर्न धुम्रपान नगर्ने
सर्जरी वा फोक्सो प्रत्यारोपण
जहिले डाक्टरको सम्पर्कमा रहने र उपचार गर्ने ।
ठाउँ हेरेर क्लिनिकल जाँचबाट र केवल लक्षण्को आधारमा रोगको निदान गर्नुपर्ने भएकाले ल्याब टेष्टमा कुनै गडबडी नदेखिने पनि हुन सक्छ ।
सम्भव छ भने पल्मोनरी फंसन टेष्ट ‘पीएफटी’ (Spirometry Test) गरेर रोगको निदान गर्न सकिन्छ ।
विशेषतः पीएफटी गर्दाको औषधिले श्वासको प्रवाहमा सुधार भएको देखिएमा दम रोगको निदान गर्न सजिलो हुन्छ ।
रगतमा ‘इओसिनोफिल’ बढेको देखिएमा दमको सम्भावना रहन्छ ।
कहिलेकाहीं छातीको एक्स—रे तथा सिटी स्क्यान पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जसमा केही गम्भीर किसिमका परिवर्तन देखिन सक्छन् ।